Ny ampahany amin'ny zavamaniry: famaritana sy ny toetra | Green Renewable
Ny ankamaroan'ny olona dia afaka mamantatra ny tena Ampahany amin'ny zava-maniry satria misy elektronika misy hazo polar amin'ny zavamaniry rehetra. Na izany aza, azo atao ny tsy iray isaky ny ampahany amin'ny zavamaniry amin'ny simenitra sy amin'ny antsipiriany.
Noho izany, hanokana ity lahatsoratra ity izahay mba hilaza aminao hoe inona ireo ampahany lehibe amin'ny zavamaniry amin'ny antsipiriany ary inona no fiasan'ny tsirairay amin'izy ireo.
1 Sombin'ny zavamaniry
Raha fintinina hoe iza no ampahany lehibe amin'ny zava-maniry, dia azo lazaina fa ireto manaraka ireto:
Mirona hanavaka saika ny rehetra izany. Na izany aza, ny toetran'ny ampahany tsirairay amin'ny zavamaniry dia tsy fantatra amin'ny antsipiriany toy izany amin'ny fomba ankapobeny. Hosoratantsika tsirairay hoe inona ny ampahany amin'ny zavamaniry.
Ny taho dia ampahany amin'ny habakabaka amin'ny zava-maniry, ary ny iray amin'ireo asany dia ny manome azy tohana sy rafitra, manohana ireo taova hafa amin'ny zavamaniry ambonin'ny tany, toy ny ravina sy ny voninkazo. Ny endri-javatra lehibe hafa dia izany mampiseho geotropisme négatif, izay midika fa mitombo amin'ny lalana mifanohitra amin'ny sinton'ny tany. Na dia nilaza aza izahay fa ny ampahany amin'ny habakabaka amin'ny zavamaniry, ny marina dia misy karazana taho maromaro sy ny asany:
Ny taho dia azo sokajiana amin'ny fomba samihafa, saingy matetika izy ireo no sokajiana mifototra amin'ny tontolo misy azy, ka manavaka ny ambanin'ny tany sy ny rivotra.
Ny tahony ambanin'ny tany izy ireo dia mizara ho tubers, rhizomes ary takamoa.
Tazo an-habakabaka Izy ireo dia azo zaraina ho tapa-kazo mitsangana, stolons, mitaingina taho sy miolakolaka taho, fa misy ihany koa ny manokana taho toy ny prickly, stoloniferous na tendril.
Araka ny voalazanay, ny iray amin'ireo asa roa lehibe amin'ny taho dia ny manohana ny ampahany amin'ny rivotra manontolo amin'ny zavamaniry. Ny iray hafa dia ny fitaterana ny otrikaina sy ny akora amin'ny ati-trano. Avy any amin'ny fakany, ilay antsoina hoe ranom-boankazo manta dia miakatra mankany amin'ny ravin-kazo mankany amin'ny ravina, izay manankarena gazy karbonika ary mamoaka ranon-tsavony tsara, izay sakafon'ny zavamaniry.
Ny fakany dia mora fantatra amin'ny ankamaroan'ny zavamaniry. Se miresaka momba ny tapany sampana izay hita matetika ao ambanin'ny tany. Izy io dia manome sakafo ny zavamaniry amin'ny otrikaina avy amin'ny tany. Izy ireo no taova voalohany miforona rehefa mitsimoka ny zavamaniry. Azo lazaina fa ny fakany no ampahany manan-danja indrindra amin'ny zavamaniry. Misy karazany samihafa ny fakany ary azo sokajiana ho samy hafa izy ireo arakaraka ny vatofantsika omen'ny zavamaniry, ny endriny ary ny fizotry ny fitomboana.
Ny fakany dia manana asa tena manan-danja ao amin'ny zavamaniry. Andeha hojerentsika hoe inona no tena asan'ny faka:
Araka ny voalazanay, iray amin`ireo asa lehibe ny fakany dia ny mitroka rano sy otrikaina amin'ny alalan'ireo volo kely misoroka ananany, mba hampita ny sakafo amin'ny tahon-kazo mankany amin'ny sisa amin'ny zavamaniry.
Asa iray hafa tanterahin'izy ireo dia ny hametraka ny firafitry ny zavamaniry manontolo eo afovoany, na avy amin'ny fakan'ny tany ambanin'ny tany, na amin'ny fakan'ny rivotra mipetaka amin'ny zava-maniry na ambonin'ny tany hafa.
Misy fakany manana ny fahafahana photosynthesize na mifikitra amin’ny zava-maniry hafa mba hitroka ny sakafony.
Ny raviny dia anisan'ny tena fantatra amin'ny zava-maniry rehetra, saika hita amin'ny zava-maniry rehetra izy na dia eo aza ny karazany, ny habeny ary ny lokony, ankoatra izany, ny ravin'ny zavamaniry dia manana asa lehibe toy ny photosynthesis sns.
Izy ireo dia taovan'ny zavamaniry, amin'ny ankapobeny dia tena manify sy maitso ny lokony, izay maniry avy amin'ny solofony na ny tahony. Izy ireo dia azo sokajiana amin'ny fomba maro samihafa: araka ny petioles, sisiny, taolan-tehezana ary na dia endrika. Amin'ny lafiny iray, ny fanasokajiana fototra indrindra dia mifototra amin'ny hoe mitazona ny raviny mandritra ny taona ny zavamaniry ary maharitra izy ireo, na raha very izy ireo amin'ny volana mangatsiaka kokoa ary ravin-davenona.
Ny ravina dia manatanteraka asa telo:
Manao photosynthesis izy ireo mba hahazoana angovo simika avy amin'ny tara-masoandro.
Izy ireo dia mamela ny zavamaniry miaina sy mifanakalo entona mandritra ny alina.
Hatsembohana izy ireo, ka mamela rano be loatra hikoriana ao aminy.
Raha ny zava-maniry maro, ny voninkazo no tena mahasarika ny olona, ​​ary izy no tompon'andraikitra amin'ny famokarana ny zavamaniry. Matetika ny voninkazo dia miloko marevaka noho izany antony izany: mba hisarihana bibikely manimba. Fa na izany aza, ny zavamaniry rehetra dia miteraka amin'ny alalan'ny voninkazo.
Misy karazany maro ny voninkazo tsy mitovy habe, loko, endriny, ary hanitra. Ny voninkazo dia misy calyx, corolla, stamena, filament, ary pistils. Misy vovobony ao amin'ny stamena (ny taovam-pananahana lahy ao amin'ny zavamaniry), ary ny fizotran'ny famokarana zava-maniry vaovao dia mitranga rehefa entina any amin'ny pistilan'ny taova vavy ny vovobony.
Tsy ny zava-maniry rehetra no mamoa, fa ireo izay mamokatra ara-nofo amin'ny alalan'ny voa no mamokatra. Rehefa zezika ny voninkazo dia mamokatra voa izay mamorona voankazo manodidina azy. Tahaka ny amin'ny ravina sy ny voninkazo dia misy karazany maro ny voankazo na legioma. Ny voankazo rehetra hohaninao dia vokatry ny zavamaniry na hazo, fa toy izany koa ny voankazo hohanina toy ny voanjo.
Ny asan'ny voankazo dia matetika miaro ny voa ary manamora ny fanaparitahana azy amin'ny alàlan'ny asan'ny biby, izay mandany ny voankazo ary mametraka ny voa any amin'ny toerana hafa, ka manamora ny fampitomboana ny karazana.
Ilaina amin'ny voa ny voa nanomboka teo miaraka amin'izy ireo izy ireo dia afaka maharitra ny fototarazony. Misy karazany maro: elatra, kely noho ny lohan'ny pin, ny haben'ny baolina tenisy ... Mba hitsimohany dia zava-dehibe fa mifanaraka amin'ny karazana tsirairay ny fepetra. Raha izany, ohatra, dia avy amin'ny toeram-ponenana misy ririnina mangatsiaka be, mba hitsimohany, dia ilaina ny hihena ambany ny mari-pana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny ampahany amin'ny zavamaniry misy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Sombin'ny zavamaniry